काउली बुढीको घरमा माग्ने बुढाको इन्ट्री – हेर्नुहोस भिडियो – Post Patrika
मुख्य पृष्ठ /Video/काउली बुढीको घरमा माग्ने बुढाको इन्ट्री – हेर्नुहोस भिडियो
नेपाल आईडलकी भाइरल ‘काउली बुढी’ रियल लाईफमा सबै चकित हुने यति धेरै हट एण्ड ब्युटी**भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला **
काठमाडौ । केही दिन अघि विश्व चर्चित अमेरिकन आईडलको नेपाली संस्करण नेपाल आईडल दोस्रो सिजनको काठमाडौ अडिसनबाट भाइरल बनेकी एक पात्र काउली बुढी सबैलाई थाहा छ
तर ती काउली बुढी साँच्चै ८० बर्षे बृद्ध जस्तै हुन् त ? यो सस्पेन्स राख्न खोजिएको थियो । तर प्रतियोगिताकै क्रममा त्यो सस्पेन्स खुल्यो । उनी ८० बर्षे बृद्ध हैनन् । उनी त अब नेपाली सांगीतिक क्षेत्रमा चिनिने हट एण्ड ब्युटी गायिकाको रुपमा परिचय बनाउन सक्ने क्षमता र रुप भएकी युवती रहिछन् । उनी हुन् ।
सुर्खेत स्थायी घर भई काठमाडौको बुद्धनगरमा बस्दै आएकी २२ बर्षिया सन्ध्या बुढा । उनको स्वर मात्र तारिफ छैन अहिले उनको कला र अभिनयको समेत जताततै चर्चा छ । हुनपनि किन नहोस् । उनले निक्कै कलात्मक अभिनय देखाईन् । त्यो सुटिङ्ग थियो ।
यसैले निर्णायकहरुलाई थाहा भएकोपनि हुन सक्छ । निमार्ण पक्षले नै त्यो रोमाञ्चक क्षण बनाउन थाहा नदिएकोपनि हुन सक्छ । तर उनले अडिसन राउण्डमा पहिलोपटक काउली बुढीको रुपमा प्रस्तुत भइन् ।
फेरी एकैछिन्मा रियल लाईफकी सन्ध्या बुढाको रुपमा प्रस्तुत भईन् । कलाकारिता र गायन उत्तिकै प्रखर थियो । नाटकीय नै भएपनि एकैछिन् । निर्णायकहरु चकित बने ।
यद्यपी त्यो उनीहरुले थाहा नपाएकोपनि हुन सक्छ । किनकी उनको कलाकारिता यति खारिएको थियो की एकैछिन अघि प्रस्तुत भएकी काउली बुढी नै सन्ध्या बुढा हो त ? दर्शक भने अन्यौलमा पर्ने नै थियो ।
धेरैले नोटिस नगरेकोपनि हुनसक्छ । उनी एबीसी टेलिभिजनको अर्को चर्चित कार्यक्रम इन्द्रेणीको नियमित गायिका समेत हु्न् । नेपाल आईडलको अडिसनपछि उनले लेखेकी छिन् ।
सम्पूर्णमा नमस्कार म काउली बुढी यानककी सन्ध्या बुढा आज धेरै खुसि छु मलाई यति धेरै माया गरिदिनु भएकोमा मैले गाएको गित अनि काउली को अभिनयलाई धेरै भन्दा धेरै मन पराइ दिनु भाको छ आशा छ आगामी दिनमा अझै माया र सुपोर्ट मिल्ने छ।
उनको त्यो कलाकारितालाई सल्यूट गर्दै उनको फेसबुक अकाउण्टबाट यो पोजेटिभ समाचारका लागि तस्विर साभार गर्दै छौ । किनकी रिलमा देखिएकी काउली बुढी रियलमा कस्ति छिन् । सबैको चासोको बिषय छ । ग्ल्यामर शब्दमा भन्नु पर्दा उनी साँच्चै हट एण्ड ब्युटी नै छिन् । हेरौ केही तस्विरहरु
श्रीकृष्णको सम्झनामा भाइरल जोडीले छोरीको नाम राखे “श्री” (भिडियो सहित)
स्व. श्रीकृष्ण श्रेष्ठकी साथी सँगम भण्डारी मिडियामा, श्रीको वास्तविकता बताउँदै श्वेता खड्कालाई यस्तो भनिन् (भिडियो सहित)
रबि लामिछानेले टेलिभिजन छा;डेपछि पत्रकार ऋषी धमलाले यस्तो सु’झाब दिदै भने “जहाँ गएपनि रबि देशको हिरो हो” (भिडियो सहित)
भगवान जस्तो श्रीमान बिनोद र अनिताको रुदा रुदै सकियो अन्तरबार्ता,अनिता हिड्न थालेपछि परे सबै चकित